Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » M & E အတွက်ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်အဖြစ်အကျိုးရှိစွာသိုလှောင်
ကိုယ့် Caringo များအတွက် Adrian Herrera, စျေးကွက်၏ VP ကနေ Blog ကိုဖတ်ပါ။ ကြောင့်များကြည့်ရှု '' ကြီးထွားလာမျှော်လင့်ထားရန်, အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမတာဝန်ခံနှင့်အချိန်အတိုဆုံးပမာဏကိုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကယ်မနှုတ်ရန်ဖိအားတိုးပေးဖို့မှာ content တွေကိုသိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ကြောင်း - သူတွေအကြောင်းနှစ်ခုထုတ်လုပ်မှု / post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဓိကနာကျင်မှုအချက်ပေါ်မှာအစက်အပြောက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာ '' ချက်ချင်း access ကို '' ။
ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖတ်ရကျိုးနပ်သည်။ : ငါသင်သည်သူတို့၏ site ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ချင်အမှု၌ကဒီမှာသူ့ဘလော့လင့်ခ်ကိုဖွင့်, သင်ကြိုက်တတ်တဲ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသို့မဟုတ်လျှင်သူ့ဘလော့ကူးယူပါတယ်www.caringo.com/blog/storage-advantage/
M & E အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည်အမျိုးအစား "ချက်ချင်း access ကို" "အခမဲ့သိုလှောင်မှု" နှင့်မျှော်လင့်ဖောက်သည်များနှင့်ကြည့်ရှုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်များ၏ဖိအားခံစားနေသည်ပေမယ့်ဒီကိစ္စများပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုအာကာသအတွင်းအထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအိမ်များအချိန်ကနေနားမထောင်ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, သူတို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ခံမှာ (သို့မဟုတ်အမည်ခံအခကြေးငွေများအတွက်) content တွေကိုသိမ်းဆည်းထားကြပြီး ပို. ပို. ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ချက်ချင်းပေးပို့တောင်းခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မာဂျင်ပြီးသား compressed ကြသောအခါဒါကြောင့်သင်ကအခမဲ့သိုလှောင်မှုမြော်လင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲ သငျသညျရှာဖွေရေးနှင့်ချက်ချင်း access ကိုပေးနိုင်သလား? သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်သို့ storage ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မည်နည်း အဖြေ (အားလုံး3ရန်) တစ်ဦးအသံဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းတွေ့မြင်သောအရာကိုတစ်ဦးအမြန်ကြည့်ယူကြကုန်အံ့။ ငါတို့မြင်ဖြေရှင်းချက်အများဆုံးမကြာခဏ archive ကိုတစ်ဦး (Isilon, StorNext သို့မဟုတ် shared သိုလှောင်မှုအချို့ကိုပုံစံကဲ့သို့) NAS ၏ပေါင်းစပ်နှင့်တိပ်ခွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်နှစ်မျိုးလုံးသိုလှောင်မှုနည်းပညာပြီးသားန်ထမ်းတစ်ဦးအနိမ့်သင်ယူမှုကွေးဆိုလိုတာကဒေတာစင်တာအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလိုအပ်ပါသလား? ရုံထက်ပိုမဝယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပြဿနာဖိုင်အရွယ်အစား, retention ကိုကြိမ်နှင့် Access တောင်းဆိုမှုကိုကြိမ်ယခုချဉ်းကပ်ပေါရာဏနှင့်စီးပွားရေးအရဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအလုံအလောက် NAS မတတ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်သင်တိပ်ခွေထဲကနေရလိမ့်မယ်ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုချက်ချင်း-negating အကြောင်းအရာကယ်မနှုတ်နိုင်သောအခြား post ကိုအိမ်များမှအပေးအယူဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုမှာအကောင်းတစ်ခက်ကိုကြည့်ယူအနည်းငယ်ပို့စ်အိမ်များဦးဆောင်တော်မူပြီ သို့သော်လုံခြုံရေးနေဆဲအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအမေဇုံ, Google, Microsoft, Facebook နှင့်အခြားသူများကိုနဲ့တူအဖွဲ့အစည်းများသည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုပေးသလဲ? တစ်ဦးချင်းစီဝန်ဆောင်မှု၏စိတ်နှလုံးသည်အဓိကမိုဃ်းတိမ်ကိုမှာအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
object သိုလှောင်မှုကိုသင်တစ်ဦးကုန်စည်ကုန်ကျစရိတ်ကွေးမှရွေ့လျားဟာ့ဒ်ဝဲ၏အသုံးဝင်သောဘဝသက်တမ်းတိုးရေးနှင့်အချက်အလက်စင်တာ footprint ကိုလျှော့ချနေချိန်တွင်သိမ်းဆည်းခြင်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် Access ပေါင်းစပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုတစ်ဦးတည်းပိုင် API ကိုမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေသို့မဟုတ်တည်ဆဲ workflow နှင့် applications များပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် CIFS / SMB, NFS များကဲ့သို့စံ protocols များထောက်ပံ့အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများရှိခဲ့ကြပြီ။ ယင်းက M & E ကိုအာကာသအတွင်းအားလုံးနီးပါးကိုအဓိကဆော့ဖျဝဲစျေးသည်ယခု S3 API ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာသင်ယခုအရာဝတ္ထုသိမ်းဆည်းခြင်း, သင့်ရဲ့ဒေတာစင်တာ၌၎င်း, မကြာခဏသင့်လက်ရှိ Workflows သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များရန်မအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလုံခြုံအကြီးဆုံးတိမ်ဖွကြောင်းတူညီသောနည်းပညာကိုမူတည်ပြီးနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤတွင် Caringo swarm ကယ်တင်ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်စွာသည်ထူးခြားသောဟာ့ဒ်ဝဲအနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် 95% drive ကိုအသုံးချ -> swarm RAM ကိုကနေပြေး
drives တွေကိုအဘို့အ 100% drive ကိုပင်လယ်အော်အသုံးချ -> စိတ်ကြိုက် metadata ကိုအရာဝတ္ထုနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်
ဟာ့ဒ်ဝဲမဆိုရောနှော -> ရောင်းချသူသော့ခတ်-in ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဟာ့ဒ်ဝဲမှ upgrade ဆက်လက်
ယင်းကိုယ်ထည်သို့မဟုတ် drive ကိုအားဖြင့်> စကေး - သင်လိုအပ်မှသာဟာ့ဒ်ဝဲကိုဝယ်
90 စက္ကန့်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်စွမ်းရည် Add -> ဝန်ချိန်ခွင်ယင်ကောင်အပေါ်ကိုင်တွယ်နေသည်
ရှိပြီးသားအရင်းအမြစ်တွေကိုအမြင့်ဆုံး -> 1 sys admin ရဲ့ 20 + PBS ကျော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်
သာ 6% overhead မှာ RAID 40 ကြာရှည်ခံမှု -> ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုသတ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီး
self-အနာရောဂါငြိမ်းစရာ -> run ကိုဟာ့ဒ်ဝဲကြောင့်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောအခါကိုဖယ်ရှားသည်အထိ, swarm ကိုယ်တိုင်ကပြုပြင်ကြလိမ့်မည်
cross platform ကိုပူးပေါင်းနှင့် Access -> Write / ဖတ် / Edit ကိုဖိုင်တွေဟာ HTTP, S3 သို့မဟုတ် NFS မှတဆင့်
သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရှာပါ - ဘက်ပေါင်းစုံရှာဖွေရေးနှင့်အတူ> ထုံးစံ metadata ကို
ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကြည့်ရှုသူများအတွက်တုံ့ပြန်မှု -> အပြိုင် upload ရောအကွာအဝေး access ကိုဖတ်ပါ
သမာဓိရှိသေချာ -> တက်ကြွသော Self-သည်အနာပျောက်စေသော, / ပြင်ဆင်ချက်စစ်ဆေးနှင့်အဆင့်မြှင့် hash တွေကိုမူပိုင်ခွင့်
Caringo swarm ကဲ့သို့အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်တစ်ခုကုန်ကျစရိတ်စင်တာထံမှသိုလှောင်မှုအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အကြီးဆုံးသောမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးအသုံးပြုမှုကိုဖောက်သည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပူဇော်ဖို့တူညီတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်အားသာချက်များ employ နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု မီဒီယာ & Entertainment ကစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲအားဖြင့်ရပ်တန့် IBC 2017 or ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
M & E ၏တောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်လျောဖို့သိုလှောင်ကန့်ကွက်
SwarmFS တစ် Highly ချွေ Hadoop မော်ကွန်းတိုက်။
သင်က7အတွက်သိုလှောင်ရာဝထ္ထုလိုအပ် 2017 အကြောင်းရင်းများ
သိုလှောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုများ: ကျနော်တို့ Big ္တု Love
အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ at ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း
မိမိအအေဂျင်စီများ '' န်ဆောင်မှုနှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်အဘို့, ကျော် $ 2.0 ဘီလီယံစုစုပေါင်းအဘိုးပြတ်နှင့်အတူဝယ်ယူသို့မဟုတ် IPO ဖြစ်စေမှု, သိမ်းသွင်း ထား. အစောပိုင်းအဆင့်များနှင့်ကြီးထွားကုမ္ပဏီများသည်သိသာထင်ရှားသောအမှတ်တံဆိပ်ထိတွေ့မှုကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။
မစ္စတာချန်းဟာအမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းရှင်, ပရဟိတ, စာရေးဆရာနဲ့ကောင်းကင်တမန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒီဂျစ်တယ်အသံနှင့်အသံဖမ်း, ထုတ်လွှင့်နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုနည်းပညာများကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆောငျကွဉျးပေးဖို့အတွက်ကူညီရာတွင်အစောပိုင်းအပေါ်သော့ချက်အလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူ၏သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေး, သိုလှောင်မှုနဲ့ Networking အတွက်နောက်ခံအစဉ်အဆက်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍတိုးမြှင့်အတွက်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်အထိချဲ့ကာ, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အင်ဂျင်နီယာနှင့်အရောင်း / စျေးကွက်ကျယ်ပြန်နှင့်အခြားဆက်စပ်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကိုစက်မှုလုပ်ငန်း။ သူကတစ်ဦးတက်ကြွဆရာနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးအတိုင်ပင်ခံ / ကုမ္ပဏီ turnarounds, ဖန်တီးမှုကြော်ငြာနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်အများအပြားနှင့် start-up ကုမ္ပဏီများ, စျေးကွက် / နည်းပညာသုံးသပ်သူများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်ရှိပါတယ်မှအကြီးတန်းအကြံပေးသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား Polytechnic ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှတစ်ဦးကဘွဲ့ရ, စန်းလူး Obispo မစ္စတာချန်းအနေနဲ့ In-Residence စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန Institute များအတွက်ဆရာအဖြစ်ဖူကောလိပ်ဖောင်ဒေးရှင်း 10th တစ်နှစ်တစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်သူ၏ 16th တစ်နှစ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ် ဖူလာနဲ့ပေါက်ဖွား။ ထို့အပြင်သူက DECA (မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Epsilon Chi နှင့်အမေရိက၏ဖြန့်ဖြူးပညာရေးဒုတ်) ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်၏ အင်ဂျင်နီယာ၏ Global စွန့်ပစ်သုတေသနအင်စတီကျု, Cal Poly, စန်းလူး Obispo နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အစိမ်းရောင်နှင့်ရွှေလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ကောလိပ်တစ်ခုအကြံပေး။ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသည်းအသန်သူဟာကုသမှု Heart Association များအတွက်အတိတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကသမ္မတရှိ၏ နှင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအများအပြား MBA ဘွဲ့ရများနှင့်ပါရဂူအဆင့်ပို့ချချက်မှာမှန်မှန် featured ပီဖြစ်ပါတယ်။ သူကမှန်မှန်နေတဲ့တင်ပြခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေ 30 စာတမ်းများကျော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးစာအုပ် Co-စာရေးဆရာ, Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, အသံလွှင့်အဘို့အကြီးတန်းအယ်ဒီတာမဂ္ဂဇင်း Beat, ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအတိတ်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် 30 နှစ်ကျော်အဘို့များစွာသောအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုပမြေားကိုမှအယ်ဒီတာပံ့ပိုး featured ။
www.cognitiveimpact.com မှာသိမှုသက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများရှုမြင်ကြသည်။ Curtis curtis@cognitiveimpact.com မှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်; Office ကို: (714) 447-4993 သို့မဟုတ် curtis@broadcastbeat.com ။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝါရင့်နဲ့ Chris Fenton Wasabi အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် - ဇူလိုင်လ 2, 2018
IABM သစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းမော်ဒယ်မိတ်ဆက် - အ Bam အကြောင်းအရာ Chain: ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှစားသုံးသူမှ - ဧပြီလ 9, 2018
Pixit မီဒီယာနှင့်အတူ Caringo Certified M & E အိုင်တီများအတွက်သိုလှောင်ရွေးချယ်မှုထပ်တိုးရန် - ဧပြီလ 5, 2018
CES2017 MStar post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017	2017-08-01
ယခင်: အဆိုပါဟူစတန် Astro နှင့်ဝါရှင်တန်နိုင်ငံသားများနယူးနွေသင်တန်း Facility မှာအားကစားပွဲတွေထဲမှာအဘို့အ VITEC ရဲ့ IPTV & ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဖြေရှင်းချက် Install
နောက်တစ်ခု: directing Duo ယာကုပ်အမျိုးကို / Slade တစ်ဘုံ Thread ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "က M & E ကိုတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်အဖြစ်ချွေသိုလှောင်" ။ http://www.broadcastbeat.com/efficient-storage-as-a-competitive-advantage-in-me/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။